छाला हेरचाह थोक बिक्रेताको लागि एक नयाँ अवसर - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अक्टोबर 9, 2020 अक्टोबर 9, 2020 थोक र B2B समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, gigs, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक - B2B, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
यद्यपि इतिहास उद्योग र बजार प्रतिरोधी वा आर्थिक मन्दीको प्रतिरोधात्मक क्षमताले पनि भरिपूर्ण छ। प्रारम्भिक संकेतहरू यो मन्दी कुनै अपवाद छैन, र ती "मन्दी प्रतिरोधी उद्योग" छाला हेरचाह बजार मा छ।
* Inky * पिंकी * लक्जरी & पौष्टिक बॉडी क्रीम इ England्ल्यान्डबाट एक शरीर क्रीम
छाला हेरचाह उत्पादनहरूका लागि माग बलियो छ, र मन्त्रालयनको बावजूद उद्योग भित्रका धेरै क्षेत्रहरू वास्तवमै बढ्ने आशा गरिन्छ।
जहाँसम्म, ती छाला हेरचाह उत्पादनहरु रिटेलर र उपभोक्ताहरु लाई प्राप्त गर्न एक चुनौती भएको थियो। यो जहाँ छ ग्लोब किन्नुहोस्, एक नयाँ ग्लोबल अनलाइन थोक बजार, आउँदछ। नयाँ उत्पादनहरू र कोटीहरू हरेक दिन थपिदै, छाला हेरचाह- साथै सौन्दर्य प्रसाधन, सौन्दर्य र व्यक्तिगत देखभाल, र ओठ उत्पादनहरू- पहिले नै हाम्रो सब भन्दा द्रुत बृद्धि कोटीहरूमा छन्।
शप ग्लोबले अन्य उत्पादनहरूको विस्तृत विविधता पनि प्रदान गर्दछ, लुगा देखि पीपीई सम्म। ग्लोब खरीददारहरु व्यक्तिगत स्टोरफ्रन्ट्स को लागी मार्गनिर्देशन गर्दछ, यी र अन्य उत्पादनहरु को लागी, खोज वा फिल्टरहरु को लागी कोटि वा देश अनुसार। ग्लोब शपले पनि खरीददारहरूको समय बचत गर्दछ, एक कुशल, एकपटक शपिंग अनुभव प्रदान गर्दछ।
जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, विक्रेताहरूका लागि तिनीहरूका उत्पादनहरू उनीहरूले प्रयोग गरेको मुद्रामा र उनीहरूले बुझ्ने भाषाको सूचीमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण ग्लोब किन्नुहोस् मा विक्रेताहरु लाई सेवाहरु प्रदान गर्दछ १०० भन्दा बढी प्रमुख भाषाहरू, र मुद्राको एक विस्तृत विविधता। प्रत्येक अधिक को बाटो मा छन्।
यो पैसा बचत गर्न पनि महत्वपूर्ण छ, त्यसैले ग्लोब शप गर्नुहोस् विक्रेता र खरीददार बीचको महँगो बिचौलिया हटाउछ। यसले ग्लोब शपलाई सक्षम पार्यो केवल विक्रेताहरु लाई उनीहरुले के बेच्छन को चार्ज गर्न।
क्यानाडाबाट LIQID फाउन्डेशन
ग्लोब शपले विक्रेताको लागि लिस्टिंग र समाचार प्रकाशनहरू उपलब्धि प्रदान गर्दछ, आउट-अफ-पकेट मूल्य विक्रेताहरूलाई। पैसा बनाउनको लागि आवश्यक पैसा बचत गर्नु सामान्य समयहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो अझ अधिक यी आर्थिक प्रयास को समय मा हुन्छ।
ग्लोब शप ग्लोबल समाचार कम्पनीको स्वामित्वमा छ, सांप्रदायिक समाचार, जहाँ पाठकहरूको आवाज छ। यो हाम्रो तेस्रो साइटको साथ हो फ्रीलान्स ग्लोबल गिग
दुबै साइटहरूले छोटो अवधिको अवधिमा ठूलो वृद्धि प्रदर्शन गरेको छ। सांप्रदायिक समाचार र फ्रीलान्स ग्लोबल गिगले हाम्रा विक्रेताहरूलाई कुनै वा कम मूल्यमा एक वैश्विक प्लेटफर्म स्थापना गरेको छ।
जो कोहीले हाम्रो लक्षित लेखहरू साम्प्रदायिक समाचार, गुगल समाचार वा फेसबुक समाचारहरूमा पढ्न सक्दछन्। सांप्रदायिक समाचारले विश्वव्यापी छाला केयर बजार सहित बजार र उद्योगहरूको विविध प्रकारका बारे अप-टु-डेट पूर्वानुमान र रिपोर्टहरू प्रदान गर्दछ। हाम्रो साइट को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
ग्लोब शप गर्नुहोस् एक नयाँ विकल्प, र खरीददारहरू र विक्रेताहरूको लागि यो चुनौतीपूर्ण समयमा जडान गर्नको लागि नयाँ तरिका। आजै प्रयास गर्नुहोस्! ग्लोबको ग्लोबल थोक विक्रेता दर्ता खरीद गर्नुहोस् नि: शुल्क छ।
सांप्रदायिक समाचार FGG थोक बिक्रेता फेला पार्दै फ्रीलान्स ग्लोबल गिग थोक बिक्री गर्नुहोस् ग्लोब किन्नुहोस् थोक थोक खरीद थोक सूची
कुकुर फ्लाई र छालाको छालाबाट छुटकारा पाउने प्राकृतिक तरिकाहरू
संरचित तार बनाम परम्परागत केबलि - - एक तुलनात्मक विश्लेषण